स्विजरल्याण्डमा आएर आत्महत्या गर्न क्यानडेलीहरु किन आकर्षित ? » नेपाल प्लस
स्विजरल्याण्डमा आएर आत्महत्या गर्न क्यानडेलीहरु किन आकर्षित ?
स्विजरल्याण्डका केहि अस्पत्तालमा न्यानडेलियालीहरुको भिड लाग्यो । वर्षेनी त्यो संख्या बढ्दै गएकोपनि छ । स्विस चिकित्शकपनि छक्क परे गत सालको संख्या देखेर । क्यानडामा उपचार राम्रो नभएर ति क्यानेडियाली स्विजरल्याण्ड धाएका भने थिएनन् । आत्महत्या गर्न चाहेर ति स्विजरल्याण्ड धाएका थिए ।
गत साल स्विजरल्याण्डको संसदले आत्महत्या गर्न पाउने ऐन पास गरिदियो । त्यसपछि चिकित्शकको सिफारिस र सहयोगमा आत्महत्या गर्न पाइने भयो स्विजरल्याण्डमा । डिग्निटास भान्ने स्विस संस्थाले आत्महत्या गर्न चाहनेकालागि सहयोग गर्नथाल्यो । हुन त आत्महत्या जसले मन लाग्यो उसले गर्न पाउँदैन । दिर्घालिन रोग लाग्यो । त्यसको उपचार भएन । बाँच्नै गाह्रो, दैनिक जिवन कठिन भएमा, जतिखेरपनि औषधीकै भरमा बाँच्नुपर्ने, बाँच्नैकालागि अति कठिन अवस्था स्रिजना भएको अवस्थाका रोगीले चितित्शकसित अनुरोध गर्न सक्छन् । यदि चिकित्शकले सिफारिस दिएको अवस्थामा तिनले सुरक्षित आत्महत्या गर्न पाउँछन् ।
मार्केट प्लसले जनाएअनुसार सन् २०१६ मा १३१ जना क्यानेडियालीहरुले आत्महत्या गर्न पाउँ भन्दै स्विस संस्थामा नाम लेखाए । किनभने क्यानडामा त्यसरि आत्महत्या गर्न पाइदैन । तर सन् २०१४ मा जम्मा ११ जना थिए । सन् २०१५ मा जम्मा १५ जना थिए । अफ्नो देशमा ऐच्क्षिक र सुरक्षित आत्महत्या गर्न नपाएपछि पाँच जना क्यानेडेयालीहरु सिधै स्विजल्याण्डको अस्पत्ताल आएका थिए । सन् २०१६ मा २०१ जना सिधै स्विजरल्याण्ड आए ।
सन् २०१६ मा विश्वका ९८ देशबाट सात हजार सात सय ६४ जनाले डिग्निटामा नाम लेखाएका थिए, आत्महत्या गर्नकालागि । छ वर्ष अगाडि छ हजार पाँच सय ९५ जना थिए । यसरि स्विजरल्याण्ड आएर आत्महत्या गर्नेको संख्या वर्षेनी बढ्दै गएको छ । ‘आत्मसम्मानकासाथ बाँच्ने वा आत्मसममनकासाथ मर्ने’ भन्ने नारा डिग्निटा भन्ने संस्थाको छ । यो यहि आत्मसम्मान रहुन्जेल बाँच्ने र आत्मसम्मान हुन छाडेपछि आत्मसममनकासाथनै मर्ने भन्नेहरु विश्वका धेरै मुलुकबाट स्विजरल्याण्ड आउँछन् ।
क्यानडामा स्विजरल्याण्डमा जसरि आत्महत्या गर्न पाइन्न । सन् २०१६ को जुन १७ बाट क्यानडामा ऐच्क्षिक आत्महत्या गर्न पाइने कानुन ल्याइयो । तर मानसिक रुपमा विरामी भएका वा रोगको उपचार नहुने, दिर्घकालिन रुपमा अंगभंग भएकाहरुले चिकित्शकको सिफारिसमा मात्रै आत्महत्या गर्न पाउँछन् । यो सुविधा एकदमै नियन्त्रितपनि छ । कतिपय अवस्थामा त सर्बोच्च अदालत वा क्रिमिनल अदालतले आदेश जारि गर्नुपर्छ र बल्ल आत्महत्या गर्न पाइन्छ ।
अरु देशमा दिईने सुविधाबाट बन्चित गर्दा क्यानडाले वार्षिक करिब एक करोड ४० लाख डलर गुमाईरहेको छ । किनभने क्यानडामा आत्महत्या गर्न पाउनुपर्ने भन्दै निबेदन दिएकाहरु मध्ये अदालतको आद्श बाहिर आउनु अघिनै अन्य देश गएर आत्महत्या गर्छन् । त्यस्ता घटना स्विजरल्याण्डमापनि आउने गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति: April 16, 2017